Ungayifaka Kanjani i-Easy Multi Display - Easy Multi Display
Ungayifaka Kanjani i-Easy Multi Display
Idalwe Qalile 19 / 10 / 2019
Uma ufuna ukwazi uyifaka kanjani i-Easy Multi Display landela le miyalo ukuze uqalise nge-Easy Multi Display ...
Qaphela: Ukufaka nokuqalisa i-Easy Multi Display uzodinga kuqala ukulanda isoftware. Ngemiyalo yokuthi ungalanda kanjani isoftware, bheka i-athikili yokusekelwa enesihloko Ungalanda kanjani i-EMD Ekuqaliseni.
Ku-Windows, vula ifasitela le-File Explorer bese uzulazulela kufayela elilandiwe.
Qhafaza kabili kufayela le-EMDSetup.exe ukuqala ukufakwa.
I-Windows izokhombisa okusheshayo okukubuza: "Ingabe ufuna ukuvumela lolu hlelo lokusebenza ukuthi lwenze izinguquko kudivayisi yakho?" Qhafaza Yebo.
Iwindi lokufaka lizovela lapho. Khetha indawo oyifunayo yokufaka. Sincoma ukushiya indawo ezenzakalelayo. Chofoza Olandelayo.
Khetha indawo yokuqala ifolda yemenyu yohlelo ongayifaka. Sincoma ukushiya lokhu njengezilungiselelo ezizenzakalelayo, bese uchofoza Olandelayo.
Buyekeza indawo yokufaka kanye nefolda yemenyu yokuqala, bese uchofoza Faka. I-Easy Multi Display izoqala ukufakwa.
Kuzovela iwindi elisha, elikucela ukuthi ukhethe ulimi lokufaka i-VLC Media Player. Khetha ulimi lwakho bese uqhafaza OK
Ukusethwa kweVLC Media Player kuzobe sekuqala. Chofoza Olandelayo.
Chofoza Olandelayo ukuvuma isivumelwano seLayisense.
Shiya izilungiselelo zekhompiyutha ezenzakalelayo bese uqhafaza Olandelayo.
Khetha indawo yokufaka ye-VLC Media Player, bese uqhafaza Faka.
Linda ukufakwa kuqedwe, bese uchofoza Qedela.
Bese ubuyela ku-Easy Multi Display Setup Wizard bese uqhafaza Qedela.
Ufake ngempumelelo i-Easy Multi Display!
Yini enye ongayenza lapho abathengisi bezinto zokudla sebephelelwe yimpahla yokukhangisa yedijithali?
Izeluleko ze-6 zokuthi ungaqalisa kanjani ibhizinisi lakho ngemuva kobhadane usebenzisa isisombululo sezimpawu zedijithali.
Ukuthola okuningi esitolo